Mogadishu Journal » David Moyes ayaa shaaca ka qaaday in Manchester United heegan ugu jirtay si ay u afduubato Gareth Bale heshiis kiisa
David Moyes ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayay Gareth Bale inuu noqdo saxiixiisii ​​ugu horeeyay ee tababare Manchester United ah sanadkii 2013, halka kooxdu xitaa heysato diyaarad helikobtar ah xilli ay isku dayeen inay afduubaan ciyaaryahanka reer Wales ee Real Madrid.
Moyes ayaa shaqada kala wareegay Sir Alex Ferguson garoonka Old Trafford sanadkii 2013, isla xagaagii uu Bales xirey rikoorkiisa adduun dhan m 85m ee uu ugu wareegay Real.
Tababaraha haatan ee West Ham ayaa shaaca ka qaaday in ka dib markii uu u calaamadeeyay Bale bartilmaameedkiisa koowaad ee suuqa kala iibsiga, United inay u soo bandhigtay ciyaaryahanka reer Wales mushahar ka qaalisan kan Real Madrid, laakiin tani kama hor istaagi karto inuu doorto inuu ku biiro kooxda reer Spain bedelkeeda.
Dhanka kale, Red Devils ayaa lasoo saxiixatay Marouane Fellaini
“Gareth Bale waxay u badan tahay inuu ahaa magacii ugu horreeyay ee aan ku fikiro markii aan shaqada qabtay,” ayuu Moyes ku sharaxay, isaga oo u maraya majaladda Evening Standard. “Waxaan u maleynayay in Gareth Bale uu ahaa ciyaaryahan Manchester United ah. Wuxuu ahaa nooca saxda ah. United waxay leedahay taariikh weyn oo ciyaartoy ballaadhan leh George Best ilaa Ryan Giggs iyo qaar badan oo kale oo qurux badan oo u dhexeeya.
"Waxaan doonayay Gareth Bale inuu noqdo saxiixaygii ugu horeeyay ee Manchester United. Laakiin mar hore ayay wadada ka yara yareyd Real Madrid. Waxaan isku dayay inaan afduubto. Waxaan isku dayay inaan helo. lacag badan ciyaaryahanka.
“Waxaan sameynay wax walba oo aan kari karno si aan isugu dayno helitaanka ciyaaryahanka, xitaa waxaan helnay diyaarad helikobtar ah oo ku sugan garoonka tababarka si aan u qaadno oo aan u soo celino, waxaan u maleynay inaan fursad helnay.
“Laakiin wuxuu doortay Real Madrid wuxuuna qaatay go’aan cajiib ah maxaa yeelay wuxuu kusii guuleystay afar Champions League, wuxuu lahaa xirfad qurux badan”.
Kadib markii uu ka dhacay booskii Bernabeu ee uu hogaaminayay Zinedine Zidane, Bale ayaa tan iyo markii uu ku soo laabtay kooxda Tottenham waxana laga yaabaa in uu kulankiisii ​​ugu horeeyay ee Spurs ciyaaro kulanka Moyes ee West Ham Axada.
Raisul Wasaare Rooble oo soo saaray Warqad kusocota Madaxda Maamul Goboleedyada (Akhriso)